Kyauktawgyi စေတီတော် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← Mahagndayon ကျောင်းတိုက်
Bagaya ကျောင်း →
လှပသော Kyauktawgyi စေတီတော် အမရပူရအတွက် (ထို့အပြင်မဟာသိကြားမင်း Ramsi စေတီတော်သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက် Taungthaman Kyauktawgyi ကိုခေါ်) အတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့ 1847 နှင့်ရုံဦးပိန်တံတား၏အဆုံးအတိတ် Taungthaman ရေကန်၏အရှေ့ပိုင်းအစွန်တွင်တည်ရှိသောရွှေ spire နှင့်အတူထိပ်ဆုံးကြီးမားတဲ့အဖြူရောင်စေတီတော်ဖြစ်ပါသည်.
တစျဖနျ, ကိုယ့်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများတစ်နည်းနည်းထပ်ထည့်ဖို့မန္တလေးမှာရှိတဲ့တော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်လက်ထောင့်အနီးတွင်တည်ရှိပြီးသောအခြား Kyauktawgyi စေတီတော်ရှိ.
အမရပူရအတွက် Kyauktawgyi စေတီတော်ရ, U-ပိန်တံတား၏အရှေ့ဘက်အဆုံးမှသင်၏လက်ဝဲဘက်ကခါးဆစ်အဖြစ်အကြမ်းဖျင်း 250m လမ်းပေါ်မှာတက်ခရီး. သင့်အနေဖြင့်စေတီတော်ခိုင်ခိုင်လုံလုံရိုက်ထည့်ဖို့ကြီးမားတဲ့အဖြူရောင်နှင့်ရွှေတံခါးပေါက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်. အဓိကတံခါးဝအတိတ် 50 အကြောင်းသင်စေတီတော်ဝန်းရံသောရှေးဟောင်းမြို့ရိုးကိုရောက်ရလိမ့်မည်. ထိုအုတ်ရိုးအတွင်းပိုင်းတစ်ဦးကထပ်မံ 50 ထို Kyauktawgyi စေတီတော်သူ့ဟာသူရန်သင့်အားငါသက်ရောက်စေမည်.
အဆိုပါစေတီတော်အလယ်ဗဟိုမြောက်ပိုင်းကနေအပြေးလေးကြီးမားသောစင်္ကြံနှင့်အတူတစ်စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်တည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်, တောင်, အရှေ့ & အနောက်.
ရွှေတိဂုံဘုရား၏အပြင်ဘက်တွင်လှလှပပ Photogenic ဖြစ်တယ်လို့နှင့်အတွင်းပိုင်းတချို့ထူးခြားတဲ့ဘဏ္ဍာကိုရတာဟာ.
အဆိုပါပန်းချီကားများဒေသခံတွေ၏နေ့စဉ်ဘဝသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းမြန်မာနက္ခတ်ဗေဒင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းများနှင့်အတူကျေးလက်ဒေသတဝိုက်တွင်တည်ရှိသည်ခဲ့တဲ့ bygone ခေတ်ကနေအများအပြားအဆောက်အဦပုံဖော်.
သင်ကူညီရှာဖွေရန် Google Maps ကိုကိုးကား Kyauktawgyi စေတီတော် အမရပူရအတွက် – Google Maps ကို
ဝီကီဓာတ်ပုံများ – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?ရှာဖွေရေး = Kyauktawgyi + စေတီတော်
သငျသညျအမရပူရသို့သွားရောက်သည့်အခါ Kyauktawgyi စေတီတော်တစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်တွေ့မြင်ရပါမည်, မန္တလေး.